Ururka Xamaas oo Gacanta Ku Dhigay Jaasuuskii Khaarijiyay Hoggaamiye Maazin Fuqahaa.
Wednesday April 12, 2017 - 11:57:43 in Wararka by Super Admin
Kadib baaritaano muddo qaatay oo ay magaalada Ghaza ee dhulka filasdiin ay sameeyeen laamaha ammaanka ee Ururka Xamaas ayay ugu dambeyntii gacanta kusoo dhigeen Unug jawaasiis ah oo Yahuudda taabacsan.
Wararka ka imaanaya dhulalka filasdiin ee ixtitaalka kujira ayaa sheegaya in uu soo gaba gaboobay baacsi iyo baadi goob qaatay dhowr iyo toban maalmood oo ay wadeen xoogaga Cizudiin Alqasaam garabka melleteri ee Ururka Xamaas iyo sirdoonka Majdi lagu magacabo waxaana dadaaladaas looga gol lahaa sidii gacanta loogusoo dhigi lahaa Unug sirdoon oo bishii lasoo dhaafay ku guuleystay in uu khaarijiyo mas’uul sare oo xamaas katirsanaa.
Ilo wareedyo ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in gacanta lagu dhigay Jaasuuskii Sirdoonka Yahuudda katirsanaa ee Dilay Hoggaamiye Maazin Fuqahaa oo 24,March,2017 lagu khaarijiyay Koonfurta Magaalada Ghaza.
Ismaaciil Jabar oo ah dacwad soo oogaha guud ee Marinka Ghaza ayaa warbaahinta u sheegay in waqti aan dheerayn ay shaacin doonaan khabarka ku aaddan in laqabtay koox katirsan sirdoonka Yahuudda.
Dilkii lagu fuliyay Maazin Fuqahaa ayaa ahaa mid ka yaabiyay Hogaamiyaasha Ururka Xamaas oo durbadiiba lasoo degdegay in ay ku eedeeyaan yahuudda Sahyuuniyadda.
Warbaahinta ka howlgasha dhulka Filasdiin ayaa saadaalisay in kooxaha Jawaasiista ah meel fagaara ah lagu dili doono sida ay caan ku yihiin xoogaga Cizudiin Alqasaam oo dagaal dhan walba ah kula jira Yahuudda.
Khaalid Mishcal iyo Ismaaciil Haniya oo kamid ah hoggaamiyaasha Kooxda Xamaas ayaa horay ugu hanjabay in Yahuudda ay ka aargudan doonaan dilalka ay kula kacday saraakiisha muqaawamada.
Sarkaal lagu khaarijiyay gudaha magaalada Muqdisho.